May252022 by adminNo Comments
बिरामीलाई नै मृ’ त्युदण्ड दिन थालियो ! श्रीलङ्कामा औषधिको चरम संकट
एजेन्सी । अकल्पनीय आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको श्रीलङ्कामा बढ्दो औषधिको अभावले चाँडै नै धेरैलाई मृत्युको मुखमा पु-याउन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन् । जीवनदायी आवश्यक औषधिको अभावमा अस्पतालहरूले बिरामीको जीवन बचाउने प्रक्रिया स्थगन गर्न बाध्य हुनुपरेको उनीहरूले जनाएका छन् । श्रीलङ्काले ८० प्रतिशतभन्दा बढी औषधिको आपूर्ति आयातबाट गर्दै आएको भए पनि सङ्कटका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिएको छ । औषधि भण्डार र पसल रित्तिएका छन् भने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । राजधानी कोलम्बोको बाहिरी भागमा रहेको ९५० शय्याको एपेक्षा क्यान्सर अस्पतालमा परीक्षण र शल्यक्रियालगायत प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ भने औषधि अभावका कारण बिरामी, तिनका आफन्त र चिकित्सक असहाय महसुस गरिरहेका छन् । क्यान्सरका बिरामीका लागि यो स्थिति ज्यादै जटिल भएको डा रोशन अमरतुङ्गा बताउँछन् ।
Apr252022 by adminNo Comments
टाउकोमा न’ क्कली कपाल टाँसेर तालुमा भित्र सुन लुकाएर ल्याउने व्यक्ति विमानस्थलबाट प’ क्राऊ, उस्को तरिका देखेर प्रहरी नै चकित.. (हेर्नुस् भिडि यो सहित )
अबुधाबीका एक यात्रुलाई नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय (आईजीआई) विमानस्थलमा आफ्नो विगमा (नक्कली कपालमा) ३०.५५ लाख रुपैयाँको सुन तस्करी गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। यात्रुलाई आईजीआई विमानस्थलको टर्मिनल ३ मा पक्राउ गरिएको भन्सार आयुक्तको कार्यालयले जनाएको छ । करिब ६३०.४५ ग्राम तौल भएको सुन मानिसको विग र मलद्वारमा लुकाइएको थियो । भन्सार अधिकारीले उनको विग मुनिबाट सुन बरामद गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । भिडियोमा कपाल खौरिएपछि उनको कपालमा सुनको ढिस्को कति सावधानीपूर्वक राखिएको थियो भन्ने देखाइएको छ। अधिकारीहरूले सावधानीपूर्वक विग निकाले र सुन बरामद गरे। ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । यसअघि जनवरीमा दुबईबाट दिल्ली विमानस्थलमा आएका एक भारतीय यात्रुको छालाको बेल्टमा लुकाएर राखिएको एक करोड रुपै
गोजीको मोबाईलले गोली छेकेर युक्रेनी सैनिकले ज्यान जोगाए, हेर्नुहोस् भिडियो भयो भाईरल ..
केही वर्षअघिसम्म बजारमा नोकिया फोनको दबदबा थियो । नोकियाका मोबाइल फोन निकै बलियो हुन्थे र सानोतिनो ठक्करबाट टुटफुट हुँदैनथे । समयक्रमसँगै फिचर फोनको ठाउँ स्मार्टफोनले लिएको छ तर नोकिया फोनको जस्तो मजबुती भने लगभग समाप्त भैसकेको छ । फोन भौतिक रुपमा कमजोर हुने मात्र होइन कतिपय अवस्थामा त पड्किएर मानिसको ज्यान नै जाने गरेका घटना समेत भएका छन् ।तर यही बीचमा एउटा स्मार्टफोनले भने बन्दुकको गोली नै छेकिदिएर एकजना सैनिकको ज्यान बचाइदिएको छ । रुस युक्रेनबीच जारी युद्धका क्रममा यो घटना भएको हो । स्मार्टफोनले गोली छेक्दा एक युक्रेनी सैनिक मृत्युबाट जोगिएका छन् ।सोसल मिडियामा भाइरल बनिरहेको एक भिडियोमा एकजना युक्रेनी सैनिकले आफ्ना सहकर्मी सैनिकलाई आफ्नो गोली लागेको मोबाइल देखाइरहेका छन् । उक्त मोबाइलमा गोली अडि्कएको छ । रुसी सेनाले हानेको गोली उनले शरीरमा राखेको सोही मोबाइलमा लाग्यो । बन्दुकक
कुखुराको भालेलाई बसमा यात्रा गराउदा ३० रुपैयाँको टिकट
भारतको तेलंगानामा बसको यात्रा गर्ने कुखुराको भालेलाई ३० रुपैयाँको टिकट थमाइएको छ । तेलंगना प्रान्तको सरकारी बसमा यात्रा गरिरहेको उक्त कुखुराका लागि बसका कन्डक्टरले भारु ३० को टिकट काटिदिएका हुन् । तेलंगानाको करिमनगरमा उक्त घटना भएको हो ।बस कन्डक्टर जी तिरुपतिले आफ्नो बसमा एकजना यात्रुले कुखुराको भाले बोकिरहेको देखे । मोहम्मद अली नामका ती यात्रुले कुखुराको भालेलाई कपडाले छोपेका थिए ।त्यसपछि कन्डक्टर तिरुपतीले ती यात्रुलाई कुखुराको भालेको टिकट शुल्क भारु ३० भुक्तानी गर्न अनुरोध गरे । मोहम्मद अलीले सुरुमा कुखुराको टिकट शुल्क तिर्न आनाकानी गरे पनि राज्यको बस सेवामा हरेक जीवित प्राणीले टिकट शुल्क तिर्नुपर्ने बताएपछि उनले खुरुक्क पैसा तिरे ।बस कन्डक्टरले कुखुराका लागि जारी गरेको बसको टिकटको तस्वीर सोसल मिडियामा भाइरल बनेको छ । साथै कुखुराको भालेको लागि टिकट काट्ने नकाट्ने विषयमा यात्रु
Apr132022 by adminNo Comments
काठमाडौं । युक्रेनले रुससँग चलिरहेको युद्धको बीचमा विपक्षी नेता भिक्टर मेदवेदचुकलाई हिरासतमा लिएको दाबी गरेको छ। युक्रेनको खुफिया एजेन्सी एसबीयूले केही तस्विरहरू पनि जारी गरेको छ, जसमा मेदवेदचुक हातकडी लगाएको देखिएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि मेदवेदचुकको गिरफ्तारीको बारेमा बोलेका छन्। मेदवेदचुकलाई रुस समर्थक नेता मानिन्छ। उनी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पनि निकट रहेको बताइएको छ । भिक्टर मेदवेदचुकलाई गत वर्ष देशद्रोहको आरोपमा घरमै नजरबन्द गरिएको थियो। मेदवेदचुक यस वर्षको फेब्रुअरीमा भागेका थिए। अहिले युक्रेनले उनलाई फेरि हिरासतमा लिएको दाबी गरेको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले मेदवेदचुकको रिहाइको बदलामा युक्रेनी नागरिक र सैनिकलाई रिहा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मेदवेदचुकलाई हिरास
केवलकार भित्र आइतबारदेखि फसेका हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने क्रममा ३ जनाको ख’सेर मृत्यु, हेर्नुहोस् यो दर्दनाक (भिडियो सहित)
“केवलकार भित्र फसेका पर्यटकलाई उद्धार गर्ने क्रममा निधन भएको छ । खबर हो भारतको झारखण्ड राज्यको देवघरको । केवलकार दु र्घटनामा फसेका ५० जना यात्रु मध्ये २ जनाको यसअघि नै मृ।त्यु भइसकेकेको र अर्काको उद्धार गर्ने क्रममा मृ, त्यु भएको हो । “पानी र खाना बिना नै २४ घन्टासम्म केवलकारभित्र बिताएकाहरुलाई हेलिकप्टरको सहयोगमा उद्धार थालिएको थियो । त्यस क्रममा हेलिकप्टरबाट ख’सेर १ जनाको मृ त्यु भएको बिबिीले जनाएको छ । “बिबिसीका अनुसार आइतबार रामनवमीको दिन त्रिकुट पहाडमा रहेको मन्दिरमा दर्शन गर्न जाने क्रममा डोरी चुडिएपछि केवलकारका २६ वटा क्याबिन अड्किएका थिए । “केबलकारको डोरी चुँडिदा ३ वटा क्याबिन भुईँमा ख’स्दा सो क्रममा १२ जना घाइते भएको थिए । आइतबार बेलुकी केबलकारमा फसेकाहरुलाई सोमबार हेलिकप्टरको सहायताले उद्धार थालिएको थियो । तलको भिडियो हेर्नुहोस्...
कोरियाले कृषिका लागि माग्यो १२ हजार आ प्रवासी कामदार…
दक्षिण कोरियाले यस बर्षको मध्यसम्ममा कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि १२ हजार आप्रवासी कामदार कोरिया लैजाने भएको छ।दि कोरिया टाइम्स्का अनुसार न्याय मन्त्रालयले विशेषगरी कृषि र माछा मार्ने कामका लागि यही बर्षको जुनसम्ममा ती कामदारहरु आफ्नो देशमा प्रवेश गराउने भएको छ। देशमा आमन्त्रित कुल १२ हजार ३ सय ३० आप्रवासी कामदारहरू मध्ये, फिलिपिन्सबाट १ सय जना कामदार सोमबार कोरिया आइपुगेका छन, २ सय कामदार बुधबारसम्म आउने छन्। याङगु काउन्टी सरकारले ३ सय फिलिपिनो कामदारहरूलाई पूर्वी ग्याङ्वोन प्रान्तको व्यस्त खेतीको सिजन अघिनै निमन्त्रणा गरेको छ।गत साता न्याय मन्त्रालयले देशमा १ लाख ३० हजार भन्दा बढी आप्रवासी कामदार र ९ सय ५० जना माछा मार्ने जहाज चालक दलका लागिका सदस्यहरुको बसाई अवधि थप्ने निर्णय पनि गरेको थियो।मन्त्रालयले यो वर्षको छ महिनापछि माछा प्रशोधन गर्ने जनशक्तिको अभाव झेलिरहेका स्थानिय उ
Apr12022 by adminNo Comments
रूसी इन्धन भण्डारण केन्द्रमा युक्रेनी सेनाले गर्यो आक्र मण…
पछिल्लो समय युक्रेन र रुस बीच भयंकर यु द्ध चलिरहेको छ। यसै बीच युक्रेनी सेनाले रुसी भूमिमा रहेको इन्धनको भण्डारण के न्द्रमा आ क्रमण गरेको छ । यो शुक्रबार घटेको हो। जहा रुसी सहर बेलग्रोदस्थित विमानस्थलमा रहेको इन्धन भण्डारण केन्द्रमा युक्रेनी सेना आक्रमण गरेको हो। जहा दुई वटा हेलिकप्टरबाट आ क्रमण गरेमा थिए। यस्ता किसिमका आक्रम णले वार्तालाई प्रभावित बनाउने कुरा रूसले जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कार्यालयका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले आक्र मणले वार्तालाई प्रभावित पुर्‍याउन सक्ने बताएका छन् । केही दिनयता रुस र युक्रेनबीचको द्वन् द्व काम भै रहेको छ। पहिले को समायमा रुस र उक्रेन बिच भएंकर यु द्ध भै रहेको र पछिल्लो समय कम भै रहेको छ। यो पनि.. सुमोना चक्रवर्ती कपिल शर्मा शोबाट बाहिरिकै हुन् त ? अनेकौ अड्कलबाजीका बीच अभिनेत्रीले खोलिन मुख... टिभी अभिनेत्री सुमोना च
६ दिनमा पाँच पटक पे ट्रोल र डिजेलको मू ल्य बृद्धि
नयाँ दिल्ली, १३ चैत : भारतमा ६ दिनमा पाँचौँ पटक पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य बढेको छ । आइतबार पेट्रोलमा प्रति लिटर मूल्य भारु ५० पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर ५५ पैसा बढेको छ । यससँगै दिल्लीमा पेट्रोल प्रति लिटर मूल्य भारु ९९ दशमलब ११ पैसा भएको छ । त्यस्तै, डिजेल प्रति लिटर मूल्य भारु ९० दशमलब ४२ पैसा पुगेको छ । यसअघि पेट्रोल प्रति लिटर भारु ९८ दशमलब ६१ र डिजेल प्रति लिटर भारु ८९ दशमलब ८७ थियो । मूल्य दर देशभर बढेको छ र स्थानीय करका आधारमा राज्यअनुसार मूल्य फरक फरक छ । पछिल्लो पटक २२ मार्चमा मूल्य बृद्धि भएको थियो । यसअघि चारै पटक प्रति लिटर पेट्रोल तथा डिजेलमा ८० पैसा बढाइएको थियो । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले बिहीबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ५-५ रूपैयाँका दरले बढाएको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थको मू
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले नेपालीलाई पठाए यस्तो सन्देश …
काठमाडौं – बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले नेपाली दर्शकलाई एक सन्देश पठाएका छन् । उनले आउँदो शुक्रबारबाट प्र’दर्शनमा आउने आफ्नो फिल्म बच्चन पाण्डे हेर्न नेपाली दर्शकलाई आग्रह गरेका छन् । सन्देशमा उनले फिल्म बच्चन पाण्डे ले मनोरन्जन दिने भन्दै आफ्ना साथी तथा परिवारहरूसँग हेर्न भिडियोमार्फत सन्देश पठाएका छन् ।उनले लेखेका छन् – ‘नमस्ते नेपाल, मेरो फिल्म ‘बच्चन पाण्डे’ यहिँ १८ मार्चमा नेपालका हलहरूमा लाग्दैछ । म यो फिल्मलाई तपाइँ आफू आफ्ना साथी तथा परिवारहरूसँग हेर्न आग्रह गर्दछु । यो फिल्म राम्रो बनेको छ भने पूर्णरुपमा कमर्सियल छ । मलाई विश्वास छ । यसले तपालाई भरपुर मनोरञ्जन दिनेछ’ए’क्सन र कमेडी मिक्स फिल्ममा अक्षय नौलो अवतारमा देखिएका छन् । फरहाद साम्जीको निर्देशनमा बनेको यस फिल्ममा अक्षयसँगै अरशद वारसी, कृति सेनन, ज्याक्लिन फर्नान्डिज , पंकज त्रिपाठी लगायतको अभिनय रहेको छ । यो पनि – बल
डिभोर्स पछि पहि,लोपटक मिडि,यामा आएकी प्रतिभाले रुँदै बखतलाई यति सम्म भनिन्, (भिडियो हेर्नुस्) (6016)
महान श्रीमान बिनोद र अनिता खड्काको अभिनयमा पहिलो भिडियोले सबैलाई रु,हायो (भिडियो सहित) (4055)
मलेशियाबाट २४ वटा नेपालीको शव नेपाल ल्याएका क्याप्टेन विजय लामाले पोखे यस्तो दु:ख..भावुक हुदै यसो भन्छन् (3459)
बिना लाइसेन्स गाडी चलाउँदा आउनसक्छ यस्तो विप, त्ति ! जुन देवकुमारलाई आइपर्यो, उनले यस्तो होला भन्ने कहिले सोचेका थिएनन्.. … (3370)
रहिनन् भारती , बलिउड अभिनेता सोनुले भाबुक हुदै लेखे यस्तो स्टाटस्.. मेरो मुटुमा तिम्रा लागी खास ठाउँ रहनेछ.. (भिडियो) (3212)
निशा घिमिरेको नेपाली गीतमा मात्र हैन भोजपुरी गीतमा समेत दमदार अभिनय-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (2993)
थीर कोइरालाले अन्जु पन्तसँग लिएको त्यो अन्त, रवार्ता; जतिबेला उनी मनोजकी श्रीमती थिइन अनि थीरसंग अन,जान (हेर्नुस भिडियो सहित) (2964)
पोखरामा कार्यक्रम गण्डकी छ ’ड्केका पत्रकार सहित १० जनाको मृ त्यु- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित ) (2947)
प्यान्टको गोजिमै पढ्कियो ओप्पो मोवाइल , दुवै खुट्टामा गम्भिर चोट , घटनाबारे यस्तो भन्छन यी युवा (भिडियो सहित) (2906)
बिनाताको बुवा साउदीबाट आए भिडियो लाइभ ,छोडेर गएकी श्रीमतिलाई दिए यस्तो संदेश (हेर्नुस् भिडियो सहित) (2901)
नवनि’ र्वाचित मेयरको निर्देशन : “दलमा लागेका शिक्षकहरुले ७ दिनभित्र रा’ जीनामा दिनु”
यस्ता पो मेयर! जो निर्वाचित भाको पर्सिपल्टै नगर सरसफाई गर्न झाडुलेर बढार्न निस्के (भिडियो सहित)
मनै छुने भिडियो… एक पोका काफल बेच्दाको खु:शी (भिडियो )
यस्ता पो मेयर त ! हर्क साम्पाङले भर्खरै धरान २० का नागरिकको लागी गरिदिए एति ठुलो फैसला..
मेयर बनेको भोलिपल्टै हर्कराज साम्पाङ खानेपानी समस्या हल गर्न पानीको मुहानमा..